Dhagayso: Ganacsatada oo la shiray madaxwayne Farmaajo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Dhagayso: Ganacsatada oo la shiray madaxwayne Farmaajo
Dhagayso: Ganacsatada oo la shiray madaxwayne Farmaajo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi “Farmaajo” ayaa kulan la qaatay ganacsato mas’uuliyiin ka socotay rugta ganacsiga iyo warshadaha.
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi “Farmaajo” wuxuu ganacsatada uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Gabeyre kala hadlay laba qodob oo aad u muhiimsan” ayuu yiri Agaasimaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoorre.
Agaasimaha Rugta Ganacsiga oo ahdalkiisa sii wata ayaa yiri “Soomaaliya waxaa ka jira Abaaro sameeyey dadka iyo duunyada, sidaa daraaddeed iney Ummadda Soomaaliyeed kuwooda wax haysta oo ay ganacsatada hoggaamineyso iyo Qurba joogta u gargaaraan dadka Soomaaliyeed oo ay Abaaruhu waxyeeleeyeen tan iyo inta ay dowladda ka cago dhiganeyso, Guddoomiyaha Rugta ganacsiga Soomaaliyeed Gabeyre isagana waa uu aqbalay”.
“Qodobka labaad ee uu Madaxweynaha kala hadlay mas’uuliyiinta Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed ayaa ah in ay dowladda ka gaacansiin doonto ganacsatada dhammeystirka shuruucda qabyada ka ah ganacsatada taasoo laga talo gelin doono ganacsatada Soomaaliyeed iyo maalgashiga dalkooda” ayuu yiri Agaasimaha Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed.
Madaxweynaha J.F. Somaaliya ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay aad ugu naxariistaan shacabka Soomaaliyeed ee haatan dhibaatada badan ay heesato.
Halkan ka dhagayso codka Agaasimaha Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed oo warbaahinta la hadlay shirka ka dib
Previous articleMadaxwaynaha oo ka taciyeeyay geerida xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya
Next articleFaallo: Xildhibaannada labada Aqal Oo ka Turjumay Rabitaanka Shacabka